गण्डकी र कर्णाली प्रदेश सरकार संकटमा, ढल्छ कि चल्छ ? « Drishti News – Nepalese News Portal
गण्डकी र कर्णाली प्रदेश सरकार संकटमा, ढल्छ कि चल्छ ?
काठमाडौं । पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनपछि तत्कालीन नेकपाको दुई पक्षीय शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा पुग्दासमेत नधर्मराएको गण्डकी र कर्णाली प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुरानै हैसियतमा पुर्याइदिएपछि संकटमा परेका छन् ।
नेपालीले भनिन्, ‘हामीले माधव नेपाल पक्षका सांसदज्यूहरुसंग पनि छलफल गरेका छौँ । केही कानूनी जटिलता छन् । तर, राष्ट्रिय राजनीति,भर्खरै सम्पन्न पत्रकार महासंघको चुनाव सबैतिर हेर्दा हामीले विश्वासको मत पाउने अवस्था नै देखिन्छ ।’ यो समाचार जनआस्था साप्ताहिकमा छ ।